OMthembu bamema umphakathi uzogijima nabo | News24
OMthembu bamema umphakathi uzogijima nabo
INGWAZI kwezokusubatha kuleli neyanqoba iComrades Marathon ngonyaka odlule (2014) uBong’musa Mthembu kanye nabanye abagijimi abaqavile abazalwa eBulwer bazobe beziqeqesha nomphakathi noma nabanye abasubathi abasafufusa ngenhloso yokubasiza.
Kuleli sonto uMthembu uthe yena nabanye abajigimi abaziwayo ngamagalelo abo eMzansi, ikakhulukazi kwiComrades Marathon, njengoThuso Mosiwa, Prodical Khumalo kanye noMncedisi Mkhize baqhamuke nalo mbono.
UMvelase ugcizelele ukuthi kuzoba kungewona umjaho noma umqhudelwano kodwa bazobe bezilolonga kusukela eBulwer kuya eMpendle ukuze batshengise umphakathi ngokuzilolonga nawo.
“Iqiniso lithi thina noThuso Mosiwa singabafana bendawo futhi sikhulele kuyo le ndawo. Into esizobe siyenza ukuziqeqesha phambi kwabo futhi sibameme bagijime nathi (training run) ukuze bafunde kobhuti abadala babo. Uma sesiqedile eMpendle siyobe sesixoxa nabo futhi sithathe nemibuzo ukuze sibacebise.
“Futhi-ke ukwenza kanje kuzosiza abagijimi abaningi abaziqeqeshela iComrades Marathon yangonyaka ozayo,”kusho uMthembu.
UMthembu uthi oMasipala iMpendle ne-Ingwe bazisiwe ngalolu hlelo futhi kukhona abazolekelela ngakho.
“Siyoqala ngo-6am zingu-27 kuZibandlela phambi kwasehholo eBulwer size siyoqeda eMpendle enkundleni yezemidlalo.
“Simema noma ubani ofisa ukuzozilolonga nathi, ngeke sicwase muntu,”kusho uMthembu.